Zirconium Powder, Zr - Goodao Technology Co, Ltd.
Dhizaini yekugadzira: Zirconium inotora hydrogen pa400-800 ℃ uye inogadzira zirconium hydride kuburikidza nenhevedzano yechikamu shanduko. Zirconium hydride yakaora pakupisa kwakanyanya. Kazhinji, hydrogen inogona kushayikwa nemvura pa500 ℃ pasi pechikamu che0.033 Pa, uye hydrogen inogona kubviswa zvachose pa800-1000 ℃.
Dhizaini yekugadzira: Zirconium inotora hydrogen pa400-800 ℃ uye inogadzira zirconium hydride kuburikidza nenhevedzano yechikamu shanduko. Zirconium hydride yakaora pakupisa kwakanyanya. Kazhinji, hydrogen inogona kushayikwa nemvura pa500 ℃ pasi pechikamu che0.033 Pa, uye hydrogen inogona kubviswa zvachose pa800-1000 ℃. Zirconium hydride inonatswa neakakwira-simba bhora kukuya uye dehydrogenated kuti iite yakakwira-yekuita ultrafine zirconium poda pasi pechando uye yakanyanya tembiricha.
Mamiriro ekuchengetedza uye kutakura ovhoni kuomesa, 2 zvese zvemuchina pombi yekupomba mweya muvheumhu mamiriro, tembiricha iri nani pamadhigirii makumi mashanu nemashanu, etc. Tembiricha yadonha pazasi pemadhigirii makumi matatu.
Zirconium upfu, simbi zirconium upfu
Mirayiridzo Chinese name ： Zirconium upfu, simbi zirconium upfu
Chirungu zita ： Zirconium upfu ； Zirconium simbi upfu
mamorekuru formula: Zr masero anorema: 91．22
Dangerous Goods Kodhi: 42005
physicochemical pfuma chitarisiko: Goridhe grey simbi kana pfumbu amorphous upfu. Kana ichinge yatsva, inoburitsa mwenje chena kuti iite zirconia.
chikuru kushanda: Inoshandiswa muindasitiri yenyukireya uye ngura inodzivirira chiwanikwa, mwenje mwenje, mafayawekisi, nezvimwewo, inoshandiswa se metallurgic deoxidizer, kemikari reagent, nezvimwe.
Nzvimbo yakanyunguduka: 1852 nzvimbo yekubikira: 4377
Kuwanda kwehukama (mvura = 1): 6--49 Kuwanda kwehukama (mhepo = 1): kupisa kunonyungudika: 251.2J / g
solubleness ： Insoluble mumvura, inogadzikana mune inopisa yakatsiga acid, hydrofluoric acid, aqua regia uye yakadzika sulfuric acid.
kupisa kwekudonha (℃): mashoma kupisa magetsi: 5mJ kumanikidza kwakanyanya (MPa):
Kupisa kuputika njodzi
combustibility: inopisa Kugadziriswa kwenjodzi dzemoto dzemitemo yekuvaka: Chepiri
flash (ing) point (℃) ： autoignition tembiricha (℃): Kuda kupisa (℃): hapana data rinowanikwa
muganhu wepasi unoputika (V%): 0-16 (g / l) muganho wepamusoro wekuputika (V%): hapana data
hunhu hunhu: Poda inokonzeresa kuputika kwemoto painopisa, yakafumurwa kuvhurika murazvo kana kuratidzwa kune oxidizer.
Kupisa (kuora) chigadzirwa: zirconia kugadzikana ： kudzikama
Taboo chinhu: Yakasimba acid, oxygen, lead. · Polymeric mhosva dzinopesana: haigone kuoneka
nzira yekudzimisa: Mvura, poda yakaoma, jecha.
Kavha yekuchengetedza uye yekufambisa Chikamu chengozi: Kirasi 4.2 Zvingangoitika zvekupisa zvinyorwa kurongedza chiratidzo chezvinhu zvine njodzi. pfumbamwe
Mapoka ekurongedza: Ⅱ
Chengetedzo yekuchengetedza nekutakura: Kuti uve parutivi rwakachengeteka, inowanzo nyoroveswa uye kupfuudzwa neasati ari pasi pe25% mvura panguva yekuchengetedza nekutakura. Chengetera mukamuri inotonhorera, ine mweya. Gara kure nemoto uye kupisa. Chengeta mudziyo wakavharwa. Gara kure nema oxidants, acids uye zvigadziko. Chiedza kuburitsa panguva yekubata kuti urambe uchirongedza zvisina kumira uye kudzivirira kuvuza.
Njodzi ine chepfu kuburitsa muganho: China MAC: 5mg / m3 Yaimbova Soviet Union MAC: Hapana mwero TLV-TWA: ACGIH 5mg [Zr] / m3 USATLV — STEL ： ACGIH 10mg [Zr] 3 m3
nzira yekupinda: Kufema kwekudya
hutano hutano: Zirconium chepfu haina kutaurwa muindasitiri.
rubatsiro rwekutanga kusvibiswa kweganda: Bvisa mbatya dzakasviba uye sukurudza nesipo nemvura inoyerera.
kumeso: Pakarepo vhura maziso epamusoro uye ezasi uye sukurudza nemvura inoyerera kana yakajairwa munyu. Enda kuna chiremba.
inhalation: Ibva panzvimbo yacho uchienda kumhepo yakachena. Enda kuna chiremba.
kumedza: Inwa mvura inodziya yakakwana, kurudzira kurutsa, tsvaga mazano ekurapa.
kuchengetedza maitiro mainjiniya kudzora: Kazhinji hazvidi kuchengetedzwa kwakakosha, asi zvinoda kudzivirira njodzi dzeutsi.
· Dziviriro yekufema: Kana kusunganidzwa kweguruva mumhepo rikapfuura chiyero, zvinokurudzirwa kupfeka wega-suction firita yekufema.
dziviriro yeziso: Kana kuwanda kweguruva mumhepo rikapfuura chiyero, pfeka makemikari ekuchengetedza magirazi
dziviriro sutu: Pfeka zvipfeko zvekudzivirira.
Kudzivirirwa kwemaoko: Pfeka magloves emakemikari-anoratidza
· Spill Response Bvisa moto. Pfekai masiki nemagirovhosi. Unganidza uye dzokorodza.
Pashure: Simbi Vanadium, Simbi V
Zvadaro: Hafnium Upfu, Hf